कस्तो छ २० गतेदेखि आइपिओ ल्याउन लागेको मध्यभोटेकोसी? - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ अर्थ ∕ कस्तो छ २० गतेदेखि आइपिओ ल्याउन लागेको मध्यभोटेकोसी?
Sindhu Khabar बुधबार, २०७८ असोज १३ / १३:५८
सर्वसाधारणका लागि मध्यभोटेकोसी जलविद्युत कम्पनीले असोज २० गतेदेखि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) बिक्रीमा ल्याउने भएको छ।
बिक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको कुल ९० लाख कित्ता सर्वसाधारण समूहको आइपिओ बिक्रीमा ल्याउन लागिएको हो।
यसमध्ये ४ लाख ५० हजार कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि र ३ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहेको ८१ लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि बाँडफाँड हुनेछ।
यसको आइपिओ ८ लाख १९ हजारले १० कित्ताका दरले पाउने छन्।
आइपिओमा २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। अनलाइन प्रणाली मेरो सेयर तथा आफ्नो बैंक खाता रहेको जुनसुकै शाखाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ।
आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याज सहित कुल १६ अर्ब ९७ करोड ३२ लाख १८ हजार लाग्ने अनुमान छ। २०७७ चैत मसान्तसम्म निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ८ अर्ब २६ करोड ५ लाख २९ हजार ३९ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.७० वर्ष रहेको छ। आयोजना समग्रमा ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ।
त्यस्तै १ प्रतिशत ऋणदाता संस्था (कर्मचारी सञ्चय कोष) का कर्मचारीहरुलाई, ३.५ प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी संस्थाका कर्मचारीहरुलाई, १९.५ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषका संचयकर्ताहरुलाई बाँडफाँट भइसकेको छ। साथै आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरुलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। सेताेपाटीबाट